Mi3 wcdma/cdma « XMS-MMF
Mi3 and Mi4 wcdma/cdma version lollipop rom(5.0.2)
By Tin Htay Ag on Monday, February 9, 2015 at 8:41pm
lollipop ချင်နေကြတဲ့ mi3/4 w/c ဘော်ဒါတွေ လန်းနိုင်ဖို့ mediafire ကနေ တင်ပေးလိုက်တယ်... သုံးရတာတော့ အတော်မိုက်တယ် အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ဗားရှင်းနဲ့ အတော်လေး error နည်းသွားတယ်... မတင်ခင် wipe all data, wipe cache လုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်နော်...... gapps တစ်ခါတည်း ပါပီးသား rom မို့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 397 mb လောက် ဖြစ်သွားတယ်... ကြိုက်မယ်ထင်တယ်... Rom
cwm recovery ကို အရင်ဆုံး updater ကနေ flash ရပါမယ်… ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ updater>select update package>choose cwm recovery ကို folder ထဲကနေ ရွေးပေးလိုက်ပီး တင်ပါ…. တကယ်လို့ ဒီနည်းနဲ့ မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ recovery mode ကိုဝင်ပီး install update.zip from sdcard ဆိုတာနဲ့ flash လုပ်ရပါမယ်… အဲဒီ့လိုလုပ်ဖို့က ဒေါင်းထားတဲ့ဖိုင်ကို update.zip လို့ နာမည်ပြောင်းပီး ဘယ်ဖိုဒါထဲမှမထည့်ဘဲ အပြင်ဘက်မှာထားပါ…ဒါမှ တင်ရင် အဆင်ပြေပါမယ်…
reboot ပြန်တက်လာပီဆိုရင် updater ကနေ reboot to recovery mode ကိုရွေးပါ.... recovery ထဲရောက်သွားရင် advance ကိုသွား.. aactive system mode မှာ 1 ဖြစ်ရမယ် 2ဖြစ်ခဲ့ရင် power ခလုတ် တချက်နှိပ်ပါ 1လို့ပြောင်းသွားမယ်.... ပီးရင် wipe factory reset လုပ်ပါ... ပီးရင် lollipop rom တင်ပါ.... wipe factory rest ထပ်လုပ်ပါ... supersu.zip တင်ပါ.. ပီးရင် reboot now ကို system 1 ကနေ တင်ပါ...
Lollipop တက်လာပါပီ...playstore ပါ မြင်ရပါမယ်... playstore ကနေ supersu ကို ဒေါင်းပီး အင်စတောလုပ်ပါ.. ပီးရင် ပေးလာမဲ့ update လုပ်ပေးပါ.. အဲဒါမှ root ဖြစ်ပါမယ်....
ဒီအဆင့်တွေ ပီးပီဆိုရင်တော့ ifont သွင်းပီး မြန်မာစာ ပြောင်းပါမယ်.....
ifont version 5.3 apk(new version)
font apply လုပ်ချိန်တွင် အင်တာနက်လိုပါသည်…. root ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ်
ဒါလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ… ပီးရင် install လုပ်ပါ.
ifont setting>change font mode>system mode(need root) ကိုရွေးပါ...
ဒီအပေါ်က ဖောင့်ကို ဒေါင်းပီး မန်မို၇ီကတ်ထဲထည့်ပါ ပီး၇င် ifont ကိုဝင် my button အပေါ်ညာဘက်က ခလုတ်ကိုနှိပ်ပီး .ttf file အတွက် my font ကိုဝင် စာပိုဒ်တခုပါတဲ့ စာမျက်နှာေ၇ာက်မယ် click here ဆိုတဲ့ အနီေ၇ာင် စာလုံးကို နှိပ်. ဒေါင်းထားတဲ့ ဖောင့်ကိုေ၇ွး... set ဆိုတာနှိပ်ပေးလိုက်ရင် reboot ကျပီး ပြန်တက်လာရင် ဇော်ဂျီ မှန်ပါပီ....
Note... xposed, wsm tool support မလုပ်သေးလို့ fonter သုံးလို့မရသလို တခြား modules တွေလဲ သုံးလို့မရပါ....
ဒီလောက်ဆိုလဲ rom, root, မြန်မာဖောင့် ပြည့်စုံပီမို့ စမ်းသပ်ချင်သူများ စမ်းသပ်နိုင်ပါပီ......
Supersu update apk.... http://www.mediafire.com/download/7bc8225l6tzo7xx
ဒီကောင်လေး ထပ်ပီး install လုပ်မှ ပီးပြည့်စုံနဲ့ root ဖြစ်ပါမယ်.. မဟုတ်ရင်တော့ root မပေါက်ပါ...